Muna 2020, Zoom yave iri imwe yekutungamira vhidhiyo musangano musangano software kumativi ose.
Inokugonesa iwe kuti ugone kudyidzana nevashandi pamwe navo kana mumisangano-yemunhu isingaite uye yanga yakabudirira zvikuru kune zviitiko zvemagariro, futi.
Zoom rave chishandiso chakakosha kune zvidiki-, zviri pakati-, uye zvakakura-zvikwata zvikwata zvinoda kuramba zvichikurukura nekuenderera mberi nekufashukira kwezuva nezuva nekukanganisa kushoma - pamwe nekuve anodikanwa akasimba nevanhu.
Zoom igore-based vhidhiyo musangano musangano iwe yaunogona kushandisa kuti ungangosangana nevamwe - kungave nevhidhiyo kana odhiyo-chete kana zvese zviri zviviri, zvese uchiita mhenyu hurukuro - uye zvinokutendera iwe kurekodha izvo zvikamu kuti uone gare gare. Inopfuura hafu yemakambani mazana mana nemazana mashanu anonzi akashandisa Zoom muna 500 uye muna 2019 akarova zvakatokura, achangobva kutora mazana matatu emamirioni ezuva rekusangana kweZoom.
Kubvisa kumashure ruzha kubva kune Zoom yako mafoni
Zoom yakaunza zvigadziro zvinokubvumira kuti ugadzirise odhiyo pane yako foni uye kubvisa zvisina kukodzera uye zvisingadiwe ruzha ruzha.
Kuti uite izvi, tinya mukati mezvisungo, wobva watsvaga odhiyo sarudzo. Imomo iwe uchaona inodonhedza menyu ine "dzvanya kumashure ruzha".
Kune akasiya siyana masero ekudzvinyirira iwe aunogona kuwedzera pano. Iyo yepamusoro ichabvisa zvakanyanya sezvinobvira, ichideredza nyaya ne fan fan uye imbwa dzinokambaira panguva iyo yakaderera matanho ichakurega uchitamba mimhanzi yepasirosi pane yakasarudzika yekufona yakajairwa neshamwari.
Kana iyo yakavakirwa-mukati ruzha kubviswa isina kukwana pane zvimwe sarudzo zviripo.
Wedzera mafirita kune Zoom yako mafoni
Zvakare pamwe neakangoita mamiriro, zvinokwanisika kuti jazz up yako Zoom mafoni nekushandisa mafirita. Izvi zvinouya nenzira mbiri uye zvinogona kuwanikwa munzvimbo imwechete yekumashure senge chaiwo mamiriro.
Iwe unogona kusarudza kana kuwedzera mavara akareruka kune kamera yako (sepia, dema uye chena uye zvakadaro) kana sarudza kubva kune akati wandei Snapchat-eque mafirita kuwedzera cartoon stylings kune kamera yako. Izvi zvinogona kunge zvisina kukodzera kune bhizinesi kufona, asi zvinofanirwa kuita kuti zvinhu zviwedzere kufadza neshamwari uye mhuri.